Cuberdon युरोप मा सबै भन्दा राम्रो र सबै भन्दा अस्पष्ट स्थानीय मिठाई को छ. यो टोपी आकारको छ, अक्सर बैजनी र ऐंसेलु भर्ने भरिएको. जब तपाईं एक मा दु: ख, तपाईंको दाँत सजिलो संग भर्नु नरम मध्य मा डुब्नु. तिनीहरूले बेल्जियम सर्वोत्तम राखिएको गोप्य अक्सर कल. गाह्रो छ किनभने केही हप्ता पछि यो संरक्षण गर्न, तिनीहरूले अक्सर निर्यात डन. तथापि, केहि अद्वितीय प्रयास गर्न र यसलाई घर ल्याउन चाहने एक पर्यटक को लागि, को cuberdon सिद्ध छ.